Vaovao momba ny indostria - fitaratra HHG
Ahoana no hitsarana ny kalitaon'ny vokatra fitaratra?
Ny vokatra fitaratra dia misy fiantraikany manokana amin'ny famokarana vera Shina, ary novolavolaina ny teknolojia famokarana fitaratra matotra.
Fa maninona ny vanin-taona fitaratra llamated Ahoana no fampiasana azy?
Eo ambanin'ny fitarihan'ny fitrandrahana mafana sy ny fihenan'ny hatsiaka, dia niova ny firafitry ny fitaratra laminated ary hisy lava be gony na be ranomaso ao anaty vera, izay manafoana ny ain'ny serivisy…
Inona ny loza ateraky ny fitaratra matroka tsy mahavita ny fenitra?
Inona avy ireo loza ateraky ny fitaratra marefo? Maro ny loza ateraky ny fitaratra tsy matotra. Indraindray ianao hahita fa rehefa tapaka ilay fitaratra matotra, ny fitaratra slag sc…
Inona no fitaratra?
Nopetahana takelaka metaly manjelanjelatra nefa henjana, roa avy amin'ny fitaratra vy fisaka roa avy eo, ary avy eo nopotehina matevina sy manify ny sarimihetsika roa misy amin'ny vy vita amin'ny plastika mangarahara ultraviolet.
Inona ny fitaratra matsilo mafy
Mizara ho fitaratra manokana sy vera mahazatra mahazatra ny vera, ka inona no fitaratra manokana? Manaraka, ny fitaratra matotra manokana dia manondro ny fitaratra ampiasaina amin'ny teknolojia manokana maoderina. Manana karazany maro izy…
Fa maninona no misafidy fitaratra laminated fiarovana ho an'ny haingo?
Enga anie 7, 2020
Betsaka ny olona mampiasa fitaovam-panamboarana vera amin'ny haingon-trano hampiakarana ny fangaraharana sy ny hazavana ao amin'ny efitrano, fa amin'ny lafiny iray kosa dia mitondra antony marim-pototra tsy fantatra izy ireo ary ny trangan'ny glas…
Fananana fitaratra misy vera goavambe sy ny fomba hiatrehana ireo olana amin'ny fanodinana ny mari-pamokarana rano sy ny fitrandrahana angovo vita amin'ny vera.
Ny orinasanay dia afaka manamboatra fitaratra matotra manokana: vera goavam-be natokana manokana, fitaratra be dia be, fitaratra be dia be, 18 metatra toradroa fitaratra be natokana manokana, sns.
Inona avy ny mampiavaka ny mpanonta fitaratra nomerika
Satria ny vokatra fitaratra mafana indrindra amin'izao fotoana izao, ny fitaratra nomerika pirinty dia nahasarika ny sain'ny maro noho ny fanamboarana loko sy mora, ny haingam-pandeha loko, ny fiarovana ny UV ary ny fanoherana avy any anaty. Howev ...
Ahoana ny fomba fanavahana ny tombontsoa sy ny tsy fatiantoka ny vera mitsoka-pihoarana?
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny indostria fitaratra angovo miaro angovo dia mivoatra haingana. Saingy, noho ny tsy fisian'ny teolojia fototra amin'ny alàlan'ny famonoana vera any Sina, ary manitatra ireo mpanamboatra ara-nofo…
Inona no fitaratra volafotsy sy fitaratra aluminium? Ahoana ny fanavahana azy ireo
Fitaratra aluminium dia fantatra koa amin'ny alàlan'ny fitaratra aluminium, fitaratra aluminium, fitaratra fitaratra, fitaratra fitaratra, fitaratra lovia fitaratra. Ny rafitry ny fitaratra aluminiana feno taratra dia manaiky ny takelaka fitaratra miendrika kalitao toy ny…
Inona avy ireo karazana loko fitaratra amin'ny vera miloko
Ny hosodoko fitaratra dia karazana hosodoko mifanentana amin'ny takelaka vita amin'ny vera, izay misy rano vita amin'ny vera miendrika rano dia mety amin'ny fananganana, fiarovana, fiarovana avo, vatosoa ary adva hafa…
Fahasamihafana eo amin'ny fitaratra loko
Ny hosodoko dia fomba fitsaboana mahazatra amin'ny haingon-trano fitaratra. Mizara sokajy roa ny loko voaroy amin'ny fitaratra loko
Torohevitra lehibe tokony hodinihina rehefa mividy vera vita amin'ny takelaka ho an'ny tranonao
Mila mandinika antony maro ianao rehefa mifidy varavarana sy varavarankely vaovao ho an'ny tranonao. Azonao atao ny misafidy eo am-baravarankely aluminium sy uPVC.
Inona ny haben'ny fitaratra mitsingevana mahazatra?
Ny haben'ny fitaratra dia manondro faobe isaky ny tahiry isam-baravarankely, izay tena voafaritry ny firafitra simika, ny mari-pana ary ny tantaran'ny rano mafana. Mifandraika amin'ny compactne koa izy io…
Fampidirana fohy momba ny fahasamihafana misy ny fitaratra marevaka miloko sy vera varnish
Ahoana ny fisafidianana ny fahaiza-manavaka ny fitaratra loko amin'ny fitaratra loko
Ahoana ny fanoloana ny fitaratra varavarankely vy vy
Ny varavarankely vy vy dia karazana varavarankely iray izay navitrika sy nampiasain'ny fanjakana hatramin'ny tapaky ny taona 1990 tany. Noho ny asany tsara sy ny vidiny, dia nomen'ny olon-drehetra t ...
Drafitra miloko loko fitaratra miloko
Tena ilaina eo amin'ny fiainantsika ny fitaratra. Androany dia hampahafantariko ny fizotran'ny loko fitaratra loko.
Ahoana ny fampiasana ny sarimihetsika fanodinana fitaratra?
Ny famonoana hafanana amin'ny fitaratra sy ny membrane-porofo mipoaka dia afaka manakana ny hafanan'ny masoandro ary manivana ny glare. Aorian'ny fametrahana ny membrane-porofo mipoaka, ny mari-pana ao anaty dia mety ho si…
Ny tombony sy ny fatiantoka entin'ny fitaratra goavambe ary ny takelaka vy miendrika entona
Ny fipoahana tampoka avy amin'ny fitaratra matanjaka tsy misy hery mekanika mivantana dia antsoina hoe fipoahana manokana. Na dia ny fipoahan'ny fipoahana ny vera mafy aza dia vokatry ny fametrahana tsy mendrika…
Ahoana ny hisorohana ny fipoahana vera henjana misy varavarana mihodina mandeha amin'ny fahavaratra
Na inona na inona izy ireo dia varavarana mandeha ho an'ny fandikan-teny na varavarana mihodina mandeha, fitaovana ravin'izy ireo dia fitaovana fitaratra avokoa, ary ny fitaratra toy izany dia matetika ny fitaratra, izay tsy noho ny…
Jiro fitaratra rindrina jiro, hevitra maitso
Ny rindrina fitaratra fitaratra dia karazana rindrina vaovao ankehitriny. Ny toetra lehibe indrindra omeny ny tranobe dia ny firaisana voajanahary amin'ny fananganana aesthetika, fiasa fananganana, fananganana angovo angovo ary b ...
Ahoana ny fomba hifehezana ny hakelin'ny vera mangatsiaka?
Ny fitaratra miramirana miaraka amin'ny lemaka malemy no mahatonga ny fiovan'ny vera fisehoana, manisy fiantraikany amin'ny kalitaon'ny fisian'ireo varavarana, varavarankely ary rindrina manidina, ary fanodinkodinam-baravarankely ...
Noho ny fiarovana ambony, ny fitaratra matroka dia mety kokoa amin'ny fisarahana an-trano
Mba hanatsarana ny fomba fijery sy ny jiro ny efitrano, matetika ny vera dia ampiasaina ho haingo, toy ny fisarahana eo amin'ny efitrano fandraisam-bahiny sy ny efitrano fisakafoanana, ny efitrano fisakafoanana ary ny kitapo…